Thwebula Google Translate 5.5 isizulu – Vessoft
Thwebula Google Translate
Google Translate – umhumushi odumile, elula futhi olunembile Google. Isofthiwe isekela izilimi eziningi futhi ikuvumela ukuba ukuhumusha amagama, amabinzana noma umbhalo ogcwele. Google Translate inikeza umsebenzi aqalaze kutheksthi lebhaliwe futhi kwenza ukuba uthole inguqulo ezingxenyeni ezikhethiwe. Isofthiwe isekela eliphakeme ehlaselwe, translation of ngesandla futhi izwi input. Google Translate ikuvumela ukuba ukuvumelanisa imishwana esetshenziswa njalo abavela kwamanye amadivaysi kanye nombono noma usule umlando wokuhumusha.
Translation and elula enembile
Ngesandla futhi izwi input
Iskena and translation of imibhalo ephrintiwe
Ukuvumelanisa emabintana Balisebenzisa kwamanye amadivayisi
Amazwana on Google Translate:
Google Translate Ahlobene software:
English, Español, Português, Italiano... Framaroot 1.9.3
English, Українська, Français, Italiano... Clash of Clans 8.551.24